28 Mgbe anyị pụtasịrị n’enweghị ihe mere anyị, anyị nụrụ na a na-akpọ agwaetiti ahụ Mọlta.+
2 Ndị ahụ na-asụ asụsụ ala ọzọ gosikwara anyị obiọma pụrụ iche,+ n’ihi na ha kwanyere ọkụ wee nabata anyị niile ma nyere anyị aka n’ihi mmiri nke na-ezo nakwa n’ihi oyi+ nke na-atụ.
3 Ma mgbe Pọl buuru otu ùkwù nkụ wee tụkwasị ya n’ọkụ ahụ, otu ajụala pụtara n’ihi okpomọkụ ma gbakụọ ya n’aka.
4 Mgbe ndị ahụ na-asụ asụsụ ala ọzọ hụrụ agwọ ahụ ka o ko n’aka ya, ha malitere ịgwa ibe ha, sị: “N’ezie, nwoke a bụ ogbu ọchụ, ọ bụ ezie na o si n’oké osimiri pụta n’enweghị ihe mere ya, ahụhụ kwesịrị ihe o metara ekweghị ka ọ dịrị ndụ.”
5 Otú ọ dị, o febara agwọ ahụ n’ime ọkụ n’enweghị ihe mere ya.+
6 Ma ha nọ na-atụ anya na ahụ́ ya ga-aza aza ma ọ bụ na ọ ga-ada na mberede nwụọ. Mgbe ha cheere ruo ogologo oge ma hụ na ọ dịghị ihe dị njọ mere ya, ha gbanwere obi ha wee malite ịsị na ọ bụ chi.+
7 Na nso nso ebe ahụ, onyeisi agwaetiti ahụ, onye a na-akpọ Pọbliọs, nwere ọtụtụ ala; ọ nabatakwara anyị nke ọma, leekwa anyị ọbịa nke ọma ruo ụbọchị atọ.
8 Ma ọ dabara na nna Pọbliọs dina ala, ahụ́ ọkụ ji ya, ọ na-anyụkwa ọbara. Pọl bakwuuru ya ma kpee ekpere, bikwasị ya aka+ n’isi ma gwọọ ya.+
9 Mgbe nke a mesịrị, ndị ọzọ bi n’agwaetiti ahụ bụ́ ndị na-arịa ọrịa dị iche iche malitere ịbịakwute ya, e wee gwọọ ha.+
10 Ha nyekwara anyị ọtụtụ onyinye wee kwanyere anyị ùgwù, mgbe anyị na-aba n’ụgbọ mmiri ịpụwa, ha bunyejukwara anyị ihe iji gboo mkpa anyị.
11 Mgbe ọnwa atọ gasịrị, anyị so ụgbọ mmiri nke si Alegzandria,+ nke nọrọ n’agwaetiti ahụ n’oge oyi, nke nwekwara ihe a tụrụ atụ́, bụ́ “Ụmụ Zus.”
12 Mgbe anyị ruru n’ọdụ ụgbọ mmiri dị na Sirakus, anyị nọruru ụbọchị atọ,
13 bụ́ ebe anyị si gaa gburugburu ma bịarute Rijiọm. Mgbe otu ụbọchị gasịkwara, ifufe nke si n’ebe ndịda malitere ife, anyị wee banye Putiolaị n’ụbọchị nke abụọ ya.
14 Anyị hụrụ ụmụnna n’ebe a, ha rịọsikwara anyị arịrịọ ike ka anyị na ha nọrọ ruo ụbọchị asaa; otú a kwa ka anyị si bịaruo Rom.
15 Mgbe ụmụnna nụrụ akụkọ banyere anyị, ha si ebe ahụ bịaruo ọbụna Ahịa Apịọs nakwa Ụlọ Atọ nke Ndị Ije ka ha zute anyị. Ozugbo Pọl hụrụ ha, o kelere Chineke ma nwee obi ike.+
16 N’ikpeazụ, mgbe anyị banyere Rom, e kwere ka Pọl nọrọ+ naanị ya, ya na onye agha na-eche ya nche.
17 Otú ọ dị, mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ kpọkọtara ndị isi n’etiti ndị Juu. Mgbe ha zukọrọ, ọ sịrị ha: “Ụmụnna m, ọ bụ ezie na emeghị m ihe ọ bụla nke megidere ndị Juu ma ọ bụ omenala nna nna anyị hà,+ e si na Jeruselem nyefee m n’aka ndị Rom dị ka onye mkpọrọ.+
18 Mgbe ndị a mesịrị nchọpụta,+ ha chọrọ ịhapụ m,+ ebe ọ na-enweghị ihe kwesịrị ọnwụ+ m mere.
19 Ma mgbe ndị Juu nọ na-asị ka a ghara ịhapụ m, ọ dịghị ihe ọzọ m maara m ga-eme karịa ịkpọku+ Siza, ma ọ bụghị n’ihi na m nwere ihe ọ bụla m ga-ebo mba m ebubo na ha mere.
20 N’ihi nke a, arịọsiri m arịrịọ ike ka m hụ unu wee gwa unu okwu, n’ihi na ọ bụ maka olileanya+ Izrel ka e ji kee m agbụ ígwè a.”+
21 Ha sịrị ya: “Anyị anataghịkwa akwụkwọ ozi banyere gị site na Judia, ọ dịghịkwa onye ọ bụla n’ime ụmụnna ndị bịaranụ nke kọrọ akụkọ ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla dị njọ banyere gị.
22 Ma anyị chere na o kwesịrị ekwesị ịnụ n’ọnụ gị ihe ndị bụ́ echiche gị, n’ihi na, n’eziokwu, n’ihe metụtara òtù a,+ anyị maara na a na-ekwugide ya n’ebe niile.”+
23 Ya na ha wee yie otu ụbọchị, ha bịakwutekwara ya n’ebe obibi ya n’ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. O wee kọwaara ha okwu ahụ site n’ịgba àmà nke ọma banyere alaeze Chineke,+ sitekwa n’iwu Mozis+ nakwa n’Akwụkwọ Ndị Amụma+ ọ gwara ha okwu na-eru n’obi banyere Jizọs, malite n’ụtụtụ ruo anyasị.
24 Ụfọdụ ndị malitekwara ikwere+ ihe ndị a na-ekwu; ndị ọzọ ekweghị.+
25 Ya mere, ebe ọ bụ na ha ekwekọrịtaghị, ha malitere ịpụ, ma Pọl kwuru otu okwu a, sị:
“Mmụọ nsọ si n’ọnụ Aịzaya onye amụma gwa nna nna unu hà okwu n’ụzọ kwesịrị ekwesị,
26 sị: ‘Gakwuru ndị a, sị ha: “N’ịnụ ihe, unu ga-anụ ma unu agaghị aghọta ma ọlị; n’ilekwa anya, unu ga-ele anya ma unu agaghị ahụ ụzọ ma ọlị.+
27 N’ihi na obi nke ndị a adịkwaghị anabata ihe, ha ejiriwokwa ntị ha nụ ihe ma ha emeghị ihe ọ bụla, ha emechiwokwa anya ha; ka ha wee ghara iji anya ha hụ ụzọ, gharakwa iji ntị ha nụ ihe ma jiri obi ha ghọta ihe wee chigharịa, ka m wee gwọọ ha.”’+
28 Ya mere, maranụ na e zipụworo ndị mba ọzọ ozi a banyere otú Chineke ga-esi weta nzọpụta;+ n’ezie, ha ga-ege ntị na ya.”+
30 Ya mere, ọ nọgidere ruo afọ abụọ zuru ezu n’ụlọ ọ na-akwụ ụgwọ ya,+ ọ na-ejikwa obiọma anabata ndị niile bịakwutere ya,
31 jiri oké nkwuwa okwu+ na-ekwusara ha alaeze Chineke, na-ezikwa ihe banyere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n’enweghị ihe mgbochi.